IPhone 7 mockups inoratidza kuti ichave ine mbeveve switch | IPhone nhau
Maawa mashoma apfuura takaburitsa mifananidzo mitsva ye iPhone 7 mockups izvo, kunyangwe chiri chokwadi kuti vaizosimbisa dhizaini yakaburitswa mwedzi yakati wandei yapfuura, haina kupa ruzivo rutsva. Izvo isu zvatakaona kwaive kumashure kweane mana iPhone 7 mockups, imwe neimwe mune rimwe remavara ayo ma iPhone 6s anowanikwa mairi. Mushure mekuona iwo mufananidzo wakasanganisirwa mune ino positi patinoona kuti iyo iPhone 7 Plus (kana Pro) mockup haina switch mbeveve, isu taizoda kuona bezel yekuruboshwe kwechigadzirwa.
Iyo yekumirira kuti uone chikamu chekuruboshwe (kana tikachitarisa kubva kumberi) cheiyo iPhone 7 mockup haina kutora nguva refu ichiuya. Vezvenhau veFrance ava (kwaanonyora OnLeaks) vakagadzirisa zvavakanyora mangwanani ano nekuwedzera mifananidzo miviri mitsva. Imwe yemapikicha iwe yauchaona pazasi yakanyatso zadzikiswa neiyo yatakaburitsa mangwanani ano: kana isu tichiona iyo yekuruboshwe kweiyo iPhone, tinogona kuona kuti ese ari maviri mavhoriyamu kumusoro uye pasi mabhatani aripo pamwe neiyo mbeveve switch tinoda zvakadii vamwe vashandisi.
IPhone 7 mockup inotitaurira kuti iyo 4.7-inch modhi ichave ne mbeveve switch
Muchidimbu, iwo mufananidzo unoratidza switch yambotaurwa inonakidza nekuti haipo mune yakaburitswa iPhone 7 Plus mockup. Kunyangwe ichokwadi kuti tiri kutaura nezvazvo mienzaniso yekuratidzira, tinogona kutanga kufunga kuti iyo 5.5-inch modhi haizove neshanduko uye mupfungwa iyi ichafanana neazvino iPad mamodheru.
Kutaura zvishoma pamufananidzo wechipiri weiyo iPhone 7 mockups, chinhu chega chinoita senge chiri kuziva kwandiri ndechekuti iwe unogona kuona pasi peiyo iPhone padyo nekamera. Zvichida kuti mumwe munhu anga akabata panzvimbo iyoyo kuratidza iyo Touch ID uye kuratidza kuti ndeyomuchina, senge iri pane iyo iPhone 6s uye kwete senge runyerekupe rwaiti iyo Bata ID zvingave zvinobata uye zvinoenderana neiyo 3D Kubata. Asi, zvakare, isu tinofanirwa kuyeuka kuti tiri kutaura nezvekuratidzira mockups. Kuti tibve mukukahadzika kwese tichafanira kumirira ingangoita mwedzi miviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mutsva iPhone 7 mockup mufananidzo unoratidza kuti uchave uine mbeveve switch